ကျော်သူ နဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 16
ပရဟိတ ကာ/ချုပ်ကြီး ဦးကျော်သူထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
စေတနာ (၈) နှစ်ပြည့် ခရီးလမ်း
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၃၁၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၊ (၂၉) ရက် ကြာသာပတေးနေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်သို့ အမှတ် (၄၁၁)၊...
စ၊ လယ်၊ ဆုံး ပေးဆပ်မှုများ
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၃၁၊ ၂၀၁၂ ၂၈.၃.၂၀၁၂ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ညနေ (၄း၀၀) နာရီချိန်တွင် (၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်) များဖြစ်ကြသော ကိုဂျင်မီနှင့် မနီလာသိန်းတို့ မိသားစုဝင်များ...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၂၉၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၇) ရက် (တပ်မတော်) နေ့ နံနက် (၉း၃၀) အချိန်တွင်...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ၂၅. ၃. ၂၀၁၂ (တနင်္ဂနွေ) နေ့ နံနက် (၈း၀၀) နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) သို့ ဓမ္မစေတီဆရာတော်...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ပြည်ပရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများစုပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားသော Patriotic Award Committee မှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြည်တွင်းရှိ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေးအတွက်...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၂၄၊ ၂၀၁၂ ၂၃.၃.၂၀၁၂ (သောကြာ)နေ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်မည့် မဲထည့်ရသော နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ နံနက် (၉း၃၀) နာရီအချိန်တွင် အစိုးရမဟုတ်သော အနုပညာသမားများသာပါဝင်သော...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၂ လူ့ဘဝတွင် သက်ရှိလူသားများသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ခရီးသွားနေကြသူများဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည့် ကဏ္ဍအသီးသီး မှတ်တိုင်များကို တစ်ခုချင်း...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၂ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) တွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ (ကိုယ်ထူကိုယ်ထ)ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့များ အတွက် စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းတရပ်အား ၁၂၊ ၃၊ ၂၀၁၂...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၁၂ ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ အများပြည်သူ လူမျိုးဘာသာ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးတို့၏ နာရေးကိစ္စ၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စ၊...
ကျော်သူ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၁၂ ကျွန်တော်ကျော်သူသည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွင် လက်ဦးဆရာ ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးမြင့်အောင်ရိုက်ကူးသော “ချစ်ကြိုး လေးနှစ်မျှင်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကထဲသို့ ရောက်ရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၁၂ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)တွင် နေ့စဉ် နေ့တဓူဝ ကူညီပေးဆပ်ဖေးမမှုများ စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေသလို လူ့သားချင်းစာနာသော မွန်မြတ် သည့်စိတ်ထားများဖြင့် လာရောက်လှူဒါန်းမှုများသည်လည်း စဉ်ဆက်မပြတ်...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၁၂ “ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြန်တော့လည်း ကျွန်တော်နားမလည်။ မတတ်ကျွမ်း။ မဆလခေတ်တွင် ကြီးပြင်းလာသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် ပညာရေးဆုံးရှုံးမှုများထဲတွင် တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပညာရေးအစမ်းသပ်ခံလူသားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ပညာရေးနှင့်ပတ် သက်၍ နောက်ဆုံးနှစ်ရူပဗေဒနှင့် ကျောင်းထွက်ခဲ့သည်။...
ဇူးဇူး (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၁၂ “ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမကိုးဘူး။ သူကိုယ်တိုင်လောင်ကျွမ်းခံပြီးမှ ပျံသန်းတဲ့ လူသားမျိုးတွေ၊ ဥက္ကာပျံလိုလူစားမျိုးတွေ” ဟု နာရေးကူညီမှု အသင်း (ရန်ကုန်) မှ အသင်းသား/သူများအား...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ပြည်မြို့၊ ရွှေပေါက်ပင်တောရကျောင်းတိုက်ရှိ “ရွှေရန်ပြေဘုရား” ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်၊ ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူပူဇော်ပွဲ၊ မြတ်စွယ်တော်အပူဇော်ခံပွဲ၊ သစ်သီဆွမ်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ၊ စုပေါင်းရဟန်းခံရှင်ပြုပွဲ၊ မယ် သီလရှင်ဝတ်ပွဲ၊ မဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲနှင့်...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၅၊ ၂၀၁၂ မတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၂ ၁၇.၂.၂၀၁၂ (သောကြာနေ့) ည (၇း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ၌ ကျင်းပခဲ့သော ဆောင်းဦးလှိုင်(တစ်ကိုယ်တော်) ဖျော်ဖြေမှု “နှလုံးသားတွေလှူမယ့်ည” တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွင်...
အမျိုးသားရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ ၁၃.၂.၂၀၁၂ ရက်နေ့သည် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်အရေးအဖွဲ့...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၂ ၁၁.၂.၂၀၁၂ (စနေနေ့) နံနက် (၆း၃၀) နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အသင်းသား/သူများတို့သည် ရန်ကုန် တိုင်း၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်ရှိ...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၂ ၆၊ ၂၊ ၂၀၁၂ (တနင်္လာနေ့) မွန်းလွဲ ၁၂း၀၀ နာရီခန့်အချိန်၌ ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ အလယ်ကျေးရွာတွင်...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၂ ၁၉၅၂ ခုနှစ်ကစတင်၍ အနုပညာလောကနှင့် အနုပညာသမားများကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ တနည်းအားဖြင့် ရုပ်ရှင်အနု ပညာရှင်များ၏ သရုပ်ဆောင်မှုအတတ်ပညာကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီထူးချွန်...